Plume Piano inogumira inyanzvi yezvigadzirwa inogadzira software R & D, chigadzirwa dhizaini, kugadzirwa uye kushambadzira kwepiano yakatwasuka, piano hombe, piyano yedhijitari uye piyano yakangwara. Plume ane hunyanzvi hwekugadzira zviuru gumi zvakatendeka pianos, 1,500 makuru pianos, 400,000 seti yezwi sosi uye keyboard, 20,000 pianos akangwara uye 150,000 digital pianos pagore.
Plume muridzi patent yekambani yekodzero yezvivakwa uye akazvimirira marangi, akangwara mainjiniya ekutsvagisa nzvimbo, ine sampling system yekugadzira, jekiseni kuumbwa, simbi, kurira kwekuyedza uye kudzora kwenhamba. Tine makore gumi nemaviri takabatana pamwe nemasangano ekutsvagisa pasirese, kupa vatengi ruzivo rwekuchenjera, rwevanhu uye rwekuita mumimhanzi kudzidzisa, kuridza zviridzwa, kushanda, kurarama, kuvaraidza nekurapa.
Mhando dzedu dzepeni Phoenix, Yemberi Nyeredzi zvakare ari epasi rose anozivikanwa maronda, uye isu tinoitawo OEM neODM yemakambani epasi rose. Zvigadzirwa zvedu parizvino zvinopihwa kuUSA, Germany, Italy, Russia, Brazil, Australia .Hongkong nedzimwe nyika makumi mashanu nematunhu, isu tinazvo makumi maviri epamutemo ekugadzirwa uye emhando dzemhando. Plume anoshandisa muimbi ane mukurumbira pasi rose, aimbova sachigaro weChina Symphony Union Mr. ) seye technical technical, wezvekukurukurirana acoustics nyanzvi uye mukuru mainjiniya Mr. Yu Jilin semhizha technical director, vese vanogona kuita yakasimba tsigiro yemhando dzedu uye mhando.
Seye yakanakisa nyika kuburitswa uye yepamusorosoro ratidziro kambani mune yenyika tsika indasitiri, Plume inotarisana nekugadzirwa kwehungwaru, chigadzirwa dhizaini, matauriro emhando, muchinjikwa-muganho uye kusanganisa kubatanidzwa. Neyemberi R & D, ine simba rekugadzira kugona, yakajairwa mhando manejimendi manejimendi, inounza yakazara yakazara nhepfenyuro michina kumba nekune dzimwe nyika, Plume ndiye mutungamiri ungwaru piyano mugadziri munyika. Tine nyanzvi dhizaini uye yekugadzira timu yekuchengetedza mhando uye hunyanzvi pane software uye Hardware.
Certification ye ISO9001: 2015 manejimendi sisitimu, ISO14001: 2004 Environmental Management Sisitimu, GB / T28001-2011 Yekuchengetedza Hutano uye Yekuchengetedza Management System, 3C, GS, TUV, RoHS, CE, FCC uye UL ndiyo inovimbisa yakasimba yekuwedzera kwekambani yedu. Plume ndiye anotungamira mukutengesa muchiridzwa chakangwara, vatinoshanda navo uye vatengi vanobatsirwa kwete kwete chete vapfumi vedu vane ruzivo uye hunyanzvi, asiwo kudzidziswa uye rutsigiro rwehunyanzvi rwunopihwa nevashandi vedu vakajeka, vanoziva, vakatendeseka. Plume akazvipira kuve inoshamisa kambani mune yakangwara chiridzwa munda.
Chikwata chedu chinokupa kukurumidza kupindura, mazano ehunyanzvi uye yakanyanya kunaka kotesheni. Gamuchirai kubvunza!
Dhijitari Piano Kugadzirisa, Smart Piano Khibhodi, Dhijitari Yakatwasuka Piano, Magetsi Akarurama Piyano, Magetsi Grand Piano, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano,